Tantara mandaloPosté par Berïnson 2014-11-01 14:03
Na mangatsiaka sy maloka manerika toy izao aza ny andro, fakam-panahy sarotra resena ny tsy hanohy hanao ny raharaha fanao mahazatra ka hikiry hihaino ny bitsiky ny saina hiato kely aloha handinika ny vita sy ny tsy vita. Andro tsy iasana nefa andraisan-karama ihany anio ka nahoana tokoa moa no tsy hanararaotra ny fotoana?
Nanapa-kevitra àry aho fa hijanona ato an-trano hanoratra. Na izany aza, tsy mety fa manembona any lavitra ny eritreritro. Namonjy nipetraka teo amin'ny solosaina ihany aho. Toerana tiako indrindra eo fa ahatsapako zavatra tsara tsy fantatro hoe inona. Hira malefaka fihainoko isan'andro no natomboko nalefa. Nanokatra pejy fotsy iray aho hanoratana.
"Fantatro inona no tokony hataoko, fantatro inona no tokony hataontsika, fantatsika fa tsy ny fotoana mikoriana no hamaha ny olana, fantatro sady fantatrao ny marina. Saingy mafy loatra iny fihin-tananao tamintsika ilay nihaona voalohany iny, mamy loatra ny nofinofy iainantsika, maro loatra ireo zavatra, tsara na ratsy, iombonantsika, ela loatra ny fotoana navelantsika handeha ka nanatevina sarotra hokosehina ny halalin'izay ho ratra ateraky ny amintsika rahatrizay ka tapaka. Manan-tsafidy..."
Naneno nanaitra mafy ahy ilay finday adinoko fisiana teo ary tapaka ny eritreritro lalina. Ianao no niantso nanontany raha afaka mihaona izao isika. Eny, hoy aho namaly, tsy niato akory hieritreritra na iray segondra monja aza. Toy izany foana aho raha vao miantso ianao, adinoko ny mety sy ny tokony ho izy, amoraiko daholo ny zavatra rehetra, alàko tsiny ny ratsy sy ny tsy azo atao. Aiza no hifankahitantsika?, hoy aho maika ery.
Dia iny aho no lasa. Nandray ny akanjo mafana sy nampiditra kiraro dia roso ny diako. Adinoko teo ilay eritreritro iny, eritreritra mpandalo sy mpiserana matetika saingy voarakitro an-tsoratra androany. Fakam-panahy sarotra resena ny tsy hanohy hahita anao.
Nony tonga tao an-trano aho, mbola hitako niandry ahy teo ilay eritreritro nandalo.
Lalasoa (Gothenburg, taona 2014)